ZANDARIMARIAM-PIRENENA TOAMASINA FAHAROA : Jiolahy telo maty voatifitra, 5 azo sambo-belona
Tsy mikoso-maso amin’ny jiolahy ny Zandarimariam-pirenena Toamasina. Ny marainan’ny alarobia 14 aogositra, raim-pianakaviana iray mpandraharaha monina ao amin’ny Kaominina Sandahatra Toamasina II no notafihina jiolahy 8 lahy mirongo basy, ka tsy namelan’izy ireo raha tsy tapitra ny ainy. 19 août 2019
Ny marainan’ny alarobia io ihany, dia nahazo antso momba io fanafihana io ny zandary tao Toamasina. Raikitra ny fifanenjehana teo amin’ny jiolahy sy ny zandary. Nanomboka teo Ivoloina mihazo ny Kaominina Ambodimandresy sy Sandahatra, Ampasimbe-Onibe ary Ambodinjirofo sy Basindrano izay samy ao anatin’ny disitrikan’ i Toamasina Faharoa izany fifanenjehana izany. Napetraka ny sakana. Voasambotra tao Basindrano ny iray tamin’ireo jiolahy. Nogejaina ny finday teny aminy. Nanampy betsaka tamn’ny fikarohana ireo namany hafa ny fahazoana io finday io. Voasambotra tao amin’ny toeram-piantsonan’ny fiara ao Fenoarivo-Atsinanana ny faharoa.
Nibaradaka ireto farany ka nanondro ireo namany sy nilaza fa mbola any anaty ala any amin’ny faritra Toamasina faharoa ny naman‘izy ireo. Raikitra noho izany ny haza lambo ny alin’ny alakamisy hifoha zoma lasa teo. Niezaka nanohitra ireo jiolahy mbola tavela tany anaty ala. Voatery nampiasa hery ny zandary. Vokany, lavon’ny balan’ny zandary ny telo tamin’ireo jiolahy. Miisa 5 ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana any amin’ny faritra Toamasina Faharoa voasambotry ny zandary. Ny iray amin’izy ireo izay tompon-tanàna mpanome vaovao, mpamantatra ireo olona hotafihina.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68236) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (404) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (180) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (96) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (86) 21 février 2020